ငွေဆောင် သို့ ၂၀၁၀ - Central Hotel ~ စန္ဒကူး
visit yinn ne sh....loott( ta yay twae kya twar bar tal)
ngwe saung ko ta khar mha ma york boo woo...
hla lite tar naw....
ငွေဆောင်ကို တစ်ခေါက် ရောက်ဖူးတယ်၊ ပုံတွေ ကြည့်ရတာနဲ့တင် နောက်တစ်ခေါက် သွားချင်စိတ် ပေါ်လာပြီ၊ သာယာလိုက်တာ....။
ငွေဆောင်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်က ရောက်ခဲ့တယ်.. သိပ်ကို ပျော်ခဲ့တာမို့ ခုထိ မမေ့နိုင်သေးဘူး
ကူးဆီမှာ ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီးနဲ့ မြင်လိုက်ရတာ ၀မ်းသာမိတယ်.. ပျော်ဖို့ သိပ်ကောင်းမှာဘဲနော်
အိုး .......မစနကူး ရေးသမျှထဲမှာ အခုငွေဆောင်သွားတဲ.ပို.စ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဘဲ။
သတင်းအချက်အလက် တိတိကျကျ (ဥပမာ -ကားဌားတဲ.ဈေးနှုန်း၊ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု) သိရလို.လဲ ဖတ်ရတာကြိုက်တယ်။
မကူးကူးကြော်ငြာပေးတာကောင်းလို. နောက်နှစ် ကျမတို.လဲ ရန်ကုန်ပြန်ရင် ငွေဆောင်ကိုရောက်အောင်သွားဦးမယ်။ပြီးတော.မကူးကူးပြောတဲ.ဟိုတယ်မှာဘဲတည်းမယ်လို.အခုထဲကစိတ်ကူးထားတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အစားအသောက်ပုံတွေကြည်.ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။ ပဲပြုတ်ပုံကိုဆို အကြာကြီးစိုက်ကြည်.နေမိတယ်။
အနော်တို့ ရောက်တုန်းက တော့ ဟိုတယ်တွေလဲ ဒီလောက်မသားနားသေးဘူး... ကမ်းခြေလဲ သေချာမလုပ်ရသေးဘူး။ လိုင်းကတော့ ချောင်းသာထက်ကြီးတယ်ဗျ။ ပြန်ရင်တော့ တစ်ခေါက်လောက်သွားရမယ်... အချက်အလက်တွေ ပေးတဲ့ ဒေါ်လေးကို ကျေးတမာဒယ်
a ma, how much it cost the hotel charges per person pls? thanks.
check on that website..for the price & room type.
မိုက်တယ်... ဒီတခါပြန်ရင် အဲဒီသွားရမယ်....